Ciidamada Ciraaq oo ku sii siqaya galbeedka magaalada Mowsil si ay uga xoreeyaan maleeshiyada ISIS - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada Ciraaq oo ku sii siqaya galbeedka magaalada Mowsil si ay uga xoreeyaan maleeshiyada ISIS
February 20, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada Ciraaq oo ku sii siqaya galbeedka magaalada Mowsil si ay uga xoreeyaan maleeshiyada ISIS. [Xigashada Sawirka: Getty Images]
London-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Ciraaq ayaa sii wada howlgaladooda ku wajahan galbeedka magaalada Mowsil, oo ah meeshii ugu dambaysay ee ay kooxda ISIS ka joogaan gudaha dalka Ciraaq.
Dhanka bari ee magaalada ayaa laga xoreeyay ISIS bishii lasoo dhaafay kadib dagaal culus.
Kumanaan ciidamada Ciraaq katirsan oo ay dabada ka riixayaan madaafiic iyo diyaaradaha dagaalka, ayaa ka qaybqaadanaya dagaalka lagu xoreynayo Mowsil.
Howlgalka ayaa waxaa hoos u riday walxaha qarxa oo ay ISIS gelisay jidka. Kooxaha miino saarka ayaa ciidamada kala qaybgalaya howlgalka si ay u saaraan qaraxyada jidka ay ISIS gelisay.
Howlgalka ISIS looga saarayo magaalada Mowsil ayaa bilaabmay bartamihii bishii Oktoobar ee sanadkii tagay. Mowsil ayaa gacanta maleeshiyada ISIS ku jirtay in ka badan labo sanno.
February 9, 2017 Diyaaradaha dagaalka Ruushka oo si aan kas ahayn duqeyn ugu dilay saddex askari oo Turki ah gudaha Suuriya